Sida loo abaabulo fasax qoys oo leh talaabooyin fudud | Safarka Absolut
Sida loo abaabulo fasax qoys
Susana godoy | | kuwa kale
Abaabul fasax qoys, had iyo jeer maahan hawl fudud. Sababtoo ah waa kala dhadhan duwan yihiin waana inaan isku daynaa inaan ka dhigno qof walba qancin. Kuwani waa maalmo lagu nasto mana dooneyno inay dhibaatooyin dhacaan. Sidaa awgeed, waxaa ugufiican in la raaco tillaabooyin ama talooyin taxane ah oo aad guuleysato.
Haddii aad had iyo jeer yeelato madax-xanuun badan markaad isku dayeyso inaad abaabusho fasax qoys, wixii hadda ka dambeeya wax dhibaato ah dib dambe uma lahaan doontid. Sababtoo ah had iyo jeer waxaa jira xalal wax ku ool ah Maxaan ka fiirsanaa. Maalmaha firaaqada ayaa imanaya oo kulligeen waxaan dooneynaa inaan ku raaxeysto. Ma rabtaa inaad ogaato sida?
1 Go'aanka meesha la tagayo waa la isla qaadanayaa marka la abaabulayo fasax qoys
2 Had iyo jeer dejiso miisaaniyad
3 U samee dariiq safar dhammaan qoyska
4 Fiiri dukumiintiyada aad u baahan tahay
5 Meelaha la dooranayo
6 Had iyo jeer ka fikir badbaadadaada
Go'aanka meesha la tagayo waa la isla qaadanayaa marka la abaabulayo fasax qoys
Waa run oo waa waalidiinta ayaa go'aansada halka loo socdo waa kan na mashquuliyey sannad kasta. Laakiin shaki la'aan, had iyo jeer way fiicnaan doontaa in la abaabulo fasax qoys, haddii aan ku sameyno hab dimuqraadi ah. Qaabkee? Hagaag, aad ufudud iyo isticmaalka qaar ka mid ah ciyaaraha. Waqti ka hor intaanan u dhaadhicin qorshaynta, way fiicantahay si furan ugu hadal. Gaar ahaan markaan horeyba u helnay carruur aan qaan-gaarin. Weydii iyaga ikhtiyaarka ay jeclaan lahaayeen kuwa ugu badan ee aad ka fikirtay. Sidan oo kale, waxaan horeyba ugala qayb qaadan doonnaa daqiiqada ugu horeysa mawduuca socdaalku kuma noqon doono 'mid culus' iyaga.
Carruurta yaryar, marwalba waad awoodaa ciyaar ku samee habka codeynta ama iyaga oo tusaaya qaar ka mid ah sawirrada meelaha la tegayo iyo doorashada midka ay ugu jecel yihiin. Sidaa darteed, qof kastaa wuxuu yeelan doonaa fikrad ugu horreysa halka uu ku qaadan doono maalmo yar oo ka goynta. In kasta oo markii hore aan u maleyneyno inaysan aheyn adeegsi badan, waa run in noocan oo kale ah ciyaaraha ama su'aalaha ayaa naga badbaadin kara shaki badan. Waa inaad qortaa fikradaha mid kasta oo ka mid ah, maxaa yeelay waa la tixgelin karaa oo la samayn karaa safarro joogsiyo kala duwan leh oo qof walba jecel yahay.
Had iyo jeer dejiso miisaaniyad
Marka aan wax badan ama ka yar ka caddayno dhadhanka xubin kasta, waa inaan dejiso miisaaniyad. Sidaa darteed, waxaan ka takhalusi doonnaa meelo badan oo hareeraheeda ka jiri kara. Had iyo jeer way fiican tahay in horay loo sii qorsheeyo. Sidaa darteed, waxaan wajihi karnaa nooc ka mid ah dallacsiinta ama qiimo dhimista. Xusuusnow in had iyo jeer la doorbidayo in laga tago xilli-ciyaareedkii sareeyay oo haddii aan awoodno, aad bilo kale oo qiimayaashu aad uga jaban yihiin. Markii aan u tagno qoys dhan, hubaal istuudiyo ama aqal leh jiko ayaa ka jaban qolalka hoteellada. Sidaa darteed, sida ugu dhakhsaha badan ee aan u bilaabayno raadinta, waxaan hubaal ka heli doonnaa fursado badan.
U samee dariiq safar dhammaan qoyska
Waxaan jeclaan lahayn inaan soo booqano matxafyada ama taalooyinka oo aan soo koobeyno halyeeyadoodii oo dhan, laakiin kan ugu yar guriga, maya. Sidaa darteed, waa inaan dejiso qorshe ku habboon dhammaan xubnaha qoyska. Waa qodob kale oo muhiim ah marka la abaabulayo fasax qoys. Waxaa laga yaabaa inay inbadan nooga qiimo badan tahay bilowga, laakiin haddii aan wax walba si wanaagsan u abaabulno, waxay u socon doontaa si habsami leh. Sidaa darteed, waa inaad dejiso nooc jadwal ah. Waa run, waxaan ku jirnaa fasax waana inaan u hoggaansamin warqadda. Laakiin waa inay jirtaa waqti lagu sameeyo booqashooyinkaas aan horay u calaamadinay, laakiin sidoo kale firaaqada, ciyaaraha ama nasashada nasashada badan. Galab bilaash ah oo ku taal baarkinka biyaha ama dukaameysiga iyo dhadhaminta macmacaanka goobta, markasta waxay noqon kartaa xulashooyin aad u jecel. Markaad ogaato meesha ama meelaha aad booqan doonto, way fududaan doontaa inaad aasaasto jadwalka loo habeeyay ee qoyska.
Fiiri dukumiintiyada aad u baahan tahay
Waa run in meesha loo socdo iyo howlaha ka socda ay muhiim u yihiin fasax wanaagsan. Laakiin marka lagu daro, waa inaan wada qaadnaa dhammaantood waraaqo ansax ah, baasaboor ama aqoonsi mid kasta oo ka mid ah xubnaha qoyska. Ka sokow kaararka caafimaadka, maxaa yeelay marna ma ogaan karno waxa dhici kara. In kasta oo ay tahay mid ka mid ah tillaabooyinka aan dhammaanteen maskaxda ku hayno, dhib ma leh in la xusuusto si looga fogaado khaladaadka daqiiqadaha ugu dambeeya.
Meelaha la dooranayo
Waxaan cadeyneynaa in midka ugu yar guriga uu dooran doono kan jardiinooyinka biyaha ama hudheelada leh barkadaha dabaasha. Sababtoo ah sidan, waxay ku qaadan doonaan maalintii oo dhan ciyaar. Waad dooran kartaa xeebta iyo buuraha labadaba, maadaama labada xulasho ay had iyo jeer jiraan waxyaabo la sameeyo, dadka waaweyn iyo carruurta labadaba. Xusuusnow inta carruurtu ku sugan yihiin aagga hudheelka lagu ciyaaro ama barkadda hoteelka, waalidku had iyo jeer way ku nasan karaan barxadda is biirsaday. Intaas waxaa sii dheer, meelo badan waxay ku leeyihiin dad ka socda hudheelka laftiisa kuwaas oo kormeeraya waxqabadyada iyaga la jira, markaa uma baahnid inaan mar walba feejignaan ku jirno. Waa dariiq ay dadka waayeelka ahi ku degganaadaan oo ku nastaan! Sidaa awgeed, meelaha noocan oo kale ah waxay bixiyaan madadaalo ka badan hoteel ku yaal bartamaha magaalada oo laga yaabo inaysan lahayn fursado badan.
Had iyo jeer ka fikir badbaadadaada
Markaynu u safrayno meel aynaan ogayn oo adduunka kale ka mid ah, waa inaynu in yar baadhitaan samaynaa. Gaar ahaan rugaha caafimaadka ama meesha aan ka heli doono dhakhaatiirta ugu fiican. Marna ma ogaan kartid !. Waa inaad ku raacdaa dawooyinka laguu qoro oo aad ogaataa meelaha aad ka iibsan karto kuwa cusub, haddii loo baahdo. Sidoo kale, marka aad halkaa joogto, waxaad dejin kartaa qodobo gaar ah haddiiba ay dhacdo in qof wareersan noqdo. In kastoo aan ka warqabi doonno carruurteenna, dhib malahan inay sitaan magacooda iyo nambarka taleefanka lala xiriiro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Sida loo abaabulo fasax qoys
Harooyinka Plitvice: Fairytale Croatia
Fudud ee Jaamacadda Salamanca